नेकपामा भगौडा जुहारीः वामदेवले दुवै खेमालाई पार्टीको एउटै घरमा फेरि हुल्न सक्लान् ? - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
नेकपामा भगौडा जुहारीः वामदेवले दुवै खेमालाई पार्टीको एउटै घरमा फेरि हुल्न सक्लान् ?
२०७७ पुष २५, शनिबार १४:३८:००
पूर्वएमाले तथा पूर्वमाओवादी गठबन्धनबाट बनेको नेकपा दुई फ्याक भएर नेताहरू एकद्दअर्काबीच पाखुरा सुर्कन व्यस्त छन् । नेकपा (ओली) समूहका नेता केपी शर्मा ओलीले अर्को समूहका नेता पुष्पकमल दाहाल, नेपाल र भीम रावललाई भडौडाको संज्ञा दिएका छन् ।
उनले ती नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिको मिटिङमा नआएर भागेर हिँडेको बताएका छन् । सुदूपश्चिमको धनगढीमा बोल्दै नेता–कार्यकर्ताहरूलाई भगौडाहरूको पछि नलाग्न सुझाव दिएका छन् । ओलीको भनाइको तत्काल प्रतिवाद गर्दै भीम रावलले तपाईं पक्की भगौडा हो भन्दै संसद्मा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नबाट भागेर विघटन नै गर्ने भगौडा नभएर को हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । यति मात्रै होइन एक पक्षका नेताहरूले अर्काे पक्षका नेताहरूलाई विभिन्न लान्छना लगाउने, लल्कार्ने सिलसिला नै चलाएका छन् ।
नेकपा दुई टुक्रा भएपछि कतै पनि नलागेका वामदेव गौतमले भने एउटा अध्यक्षले पार्टीलाई थाहै नदिई छापामार शैलीमा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने र अर्का अध्यक्षले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नबाट भागेर संसद् नै भंग गरिदिनु गलत भएको बताएका छन् । उनले दुवै पक्षलाई मिलाउन रोडम्याप तयार गरेको समेत बताएका छन् । नेकपाका दुवै फ्याकका नेताहरू आक्रामक रूपमा एक–अर्कामाथि खनिने र नेता–कार्यकर्ता तान्न सबै शक्ति खर्च गर्न लागेका बेला वामदेवले उनीहरूलाई पार्टीको एउटै घरमा हुल्न सक्लान् ?
नेकपाका ओली समूह र दाहाल–नेपाल दुवै समूहले औपचारिक रूपमा एक–अर्को समूहका नेताहरूलाई कारबाही भने गरेका छैनन् । कुन खेमाले कति केन्द्रीय सदस्य आफूतिर छन् भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेका छैनन् । जसले गर्दा निर्वाचन आयोगलाई पनि आधिकारिक नेकपा कुन हो ? झण्डा र चुनाव चिह्न कसलाई दिने भन्ने कुरामा अन्योल रहेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समूहले दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाएको छ तर केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएको छैन भने दाहाल–नेपाल समूहले पनि ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यष बनाएको छ तर उनलाई साधारण सदस्यबाट हटाएको छैन ।
विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट हटाएको छ तर सदस्यताबाट हटाएको छैन । यी सबै अवस्थाले कुनचाहिँ समूह वास्तविक भगौडा हो कसैले पनि स्पष्ट भन्न सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचन ओयोगलाई पनि कुन आधिकारिक हो भनेर छुट्याउन कठिन भएको बेला अरूले भन्न सक्ने कुरै भएन ।
नेकपा विभाजनपछि केपी ओली तथा दाहाल–नेपाल दुवै समूहतिर खुलेर नलागेका वामदेव गौतमले आफू दुवै पक्षलाई पुनः एक बनाउने योजनामा लागेको बताउँदै आएका थिए । उनले शनिबार सबै पक्षलाई नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानमा संलग्न हुन अपिल गरेका छन् । उनले नेकपा एकता राष्ट्रिय संयोजकको हैसियतमा जारी गरेको अपिलमा आमनेता तथा कार्यकर्तालाई कमरेडहरू तपाईंहरू जहाँ भए पनि त्यही ठाउँमा एकता अभियानको नाम संगठन खडा गर्नुहोस् र फुटमा लागेका नेताहरूलाई सम्झउनुस् । पार्टी एक भएर अघि बढ्न आह्वान गर्नुहोस् भनेर उल्लेख गरेका छन् ।
विभाजनपूर्वको नेकपाका उपाध्यक्ष रहेका वामदेव गौतमले बुधबार एकताको खाका सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । उनले अघि सारेको खाकामा माघमा नेकपाको महाधिवेशन गरेर ओलीलाई बिदा गर्ने र ओलीले प्रस्ताव गरेको वैशाखमा हुने निर्वाचनमा जाने रहेको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन् ।
उनको यो प्रस्तावलाई दुवै पक्षले मञ्जुर गर्लान् ? अहिलेको चासोको विषय हो । अर्को, आमरूपमा प्रधानमन्त्री ओेलीको कदमलाई संविधानविरोधी भनिरहेको अवस्थामा वामदेवको वैशाखको चुनावमा जाने प्रस्तावलाई कसरी लिइएला ? पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ वकिलहरू र नागरिक समाजका अगुवाहरूले संविधानतः प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने बताएका छन् । वामदेवको प्रस्तावले पार्टी एकताका लागि सहयोग त गर्ला तर संविधानको करेक्सन गर्नेछैन ।
पार्टीमा औपचारिक रूपमै आरोप–प्रत्यारोपबाट सुरु भएको विभाजन दुवै पक्षले अहिले आक्रामक रूपमा अघि बढाइरहेका छन् । उनीहरूले अर्को पक्षका नेताहरूलाई कसरी बढी अपमानित गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छन् भने आफ्नो पक्षमा ल्याउन आक्रामक अभियान पनि सञ्चालन गरेर अघि बढिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पुनः एकता भएर नेताहरू वामदेवको प्रस्ताव अनुसार एक ठाउँमा आउन कठिन छ ।